Ft Oriọna, Isiokwu Oriọna, Oriọna Ikebe, ikanam nkwụnye, adịghị adị Ft Oriọna - Goodly
Ekwentị: + 86-0755 28684337
Metal Ft Oriọna
Tripod Ft Oriọna
Adịghị adị Ft Oriọna
Metal Isiokwu Oriọna
Wood Isiokwu Oriọna
USB Isiokwu Oriọna
1-5W ikanam nkwụnye
6-12W ikanam nkwụnye
18-24W ikanam nkwụnye
Ìhè gị ime na anyị pụrụ iche, mmebe Metal n'ala oriọna. Igba okomoko n'ime nkuku na alcoves, ma ọ bụ gbapụ ka a mma, ikuku na-agụ nook. Chọgharịa anyị mmepụta nke dịkọrọ ndụ na omenala ọkụ, si domed metal aghụghọ na Moroccan-sitere n'ike mmụọ nsọ oriọna, ka mara Metal ọkụ na ogologo, dị gịrịgịrị ekwekọghị.
High on style, tripod n'ala oriọna ntabi tinye classiness ọ bụla ohere! Mee a nkuku ụlọ ma ọ edowe otu n'akụkụ gị sofa ke ndụ ime ụlọ maka a mma mgbakwunye. Mee ka ụlọ gị mma na-egbuke egbuke ngwọta si anyị ọkụ collection na Goodly Ìhè. Eche n'ala oriọna na metal risịrị, tripod owuwu ma ọ bụ osisi nkọwa.
Isiokwu oriọna ka ị ezi-na-akụ ikuku nke a ụlọ na ndị ọzọ ụzọ karịa otu. Ha na-enye gị ọzọ na ìhè ebe ị chọrọ ya mgbe nwekwara agbakwunye a bit nke mmadụ. Anyị bụ ndị dị na a dum nhọrọ nke ekwekọghị ka ịgbakwunye na mmezi agba, udidi na ìhè gị home.Metal Isiokwu oriọna, Wood table oriọna, USB table oriọna ...
Modern na sleek, a adịghị adị Ft Oriọna si Goodly Light agbakwụnye ozugbo style ka ọ bụla n'ime ụlọ. Nke a pụtara oriọna na-emepụta a ọgaranya, mara ambience, na ya okpukpu abụọ ka a na-tiered shelf, àjà zuru okè ntụpọ maka egosipụta gị akwụkwọ, ite ma ọ bụ foto okpokolo agba. Nke a bara uru na nkecha shelf n'ala oriọna ga-ele anya oké esote gị oche akwa, sofa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mpempe ngwá ụlọ n'ụlọ gị.
Goodly Light Technology Co., LTD. e wuru 2015 na Odude na Shenzhen.Weare na-elekwasị anya kpọbata iche iche nke ime ụlọ obere oriọna anyị customers.Justafter otu afọ, anyị na-ọma nweta ahịa si ntụkwasị obi na hight otuto withexcellent àgwà na completive price.Our Ahịa na-bụghị naanị na ChinaMainland, kamakwa Europe, America na na Southeast Asia.Most nke ourcustomers mepụtara ọbụna ike mmekọrịta, si nkịtị businesspartner azụmahịa aghụghọ ibe. Iji izute na anyị customersrequirements, anyị wuru nwanna anyị Light factory-Grand Champ LightingTechnology Co, LTD na Huizhou. N'ụzọ dị otú a, anyị na ngwaahịa na ihe completiveprices na ngwaahịa nso na-aka mma, Site Ikanam-akwọ ụgbọala Ikanam oriọna, site lampparts mezue lamps.We bụ ihe soplaya USA Target, Walmart na BBB.
Na 2017, dị ka manycustomers chọrọ, anyị na-amụ na ịmakụ mail orders.As on lineshopping na-abụghị nanị na-nabatara na China, ma na-na niile world.Nowour ngwaahịa na-ere ọma na Amazon na Taobao, TMall.COM Ma JD .COM na anyị ezi mma na ahịa, especiallyour obere ngwugwu na-nabatara site ahịa anyị.
Goodly Light, ọ bụ yourgoodly Họrọ na-eme ka ìhè unu na-adị mma!
R1120, Tiedong Park, Ping ihe Road, Pinghu Street, Longgang Destric, Shenzhen, China, 51811
Kpọọ anyị ugbu a: + 86-0755 28684337